Alex Ferguson tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Home FOOTBALL MANAGER Alex Ferguson tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Nohavaozina farany teo Desambra 18, 2017
Ny LB dia manolotra ny tantara feno an'ny mpilalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Fergie'. Ny tantaram-pianakavian'i Alex Ferguson momba ny tantaram-pianakaviana plus untold Ny zava-misy momba ny biôgraîka dia mitondra ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Ankehitriny tsy misy adieu intsony, Lets Begin.
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: Voalohandohan'ny fiainana
I Sir Alexander Chapman Ferguson dia teraka tany Glasgow Scotland, tamin'ny 31st of December 1941 nataon'i Alexander Beaton Ferguson (ray) sy Elizabeth Hardie Ferguson (reny).
Teraka tao an-tranon'ny renibeny tao amin'ny Shieldhall Road tao Govan izy saingy nitombo tao amin'ny trano iray tao amin'ny 667 Govan Road (izay efa nopotehina hatramin'izao). Nipetraka niaraka tamin'ny ray aman-dreniny izy sy i Martin, zandriny lahy, tamin'izy mbola kely. Ny tanànany, Govan dia vondron'olona miasa ao Glasgow, Ecosse. Ny olona rehetra monina ao an-tanàna, anisan'izany ny dadan'i Ferguson, dia nanana fahafahana hanao ny fandraisam-bahiny. Raha ny tena marina, niaina tamina tranobe fananganana sambo izy tamin'ny mbola kely.
Nirotsaka an-tsehatra i Alex, nanatrika ny sekoly ambaratonga fototra Broomloan Road ary taorian'i Govan High School, ary nanohana ny ekipan'ny Rangers football. Na dia izany aza dia nisy zavatra hafa hafa momba azy raha oharina amin'ny ankizy hafa tamin'ny taonany. Zatovolahy mahay izy saingy tsy dia liana tamin'ny fandinihana, ary nazoto kokoa tamin'ny lalao baolina kitra.
Naleony nisafidy baolina baolina kitra niaraka tamin'ny zandriny lahy, Martin, ary ny namany tamin'ny alàlan'ny lalantsara teo anelanelan'ny tranon'ny trano, ary niaraka tamin'ny fanampian'ny raim-pianakaviana, dia lasa tanora manana talenta mahafinaritra izy.
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Tonga avy any amin'ny fianakaviana mahantra ny Fergie. Manana tokantrano mahantra nefa sambatra izy tamin'ny fiainany tao amin'ny faritry ny toeram-piompiana ao Govan, Glasgow. Ny dadany dia tsy nampitahiry ny hevi-dehibe rehetra teo aloha tany amin'ny sehatry ny fanorenana. Nitoetra ho baolina fanatanjahantena izy ho an'ny velona izay nanome azy karama kely.
Na izany aza, enin-taona tao anatin'ny fahaterahan'i Alex Ferguson no nialàn'i Alexander Beaton Ferguson avy amin'ny mpilalao baolina amperin'akora, noho ny fahafahana tonga tao amin'ny orinasam-panorenana Glasgow. Nihodikodina izy plater helper . Tamin'ity indray mitoraka ity dia natoky izy ary afaka mamelona an'i Alex (ambany), ny rahalahiny sy ny reniny.
Indrisy fa ho an'i Alex Ferguson, samy maty tamin'ny ray aman-dreniny avy amin'ny aretina toy izany (homamiadan'ny havokavoka) ny taonan'ny ray aman-dreniny talohan'ny taonan'ny 67 izay ambany noho ny taona niainan'i Britanika. Na izany aza dia samy mpifoka sigara izy ireo. Ny rain'i Alex Ferguson dia maty noho ny homamiadan'ny havokavoka tamin'ny taona 66 tamin'ny taona 1979. Ny renin'i Ferguson dia maty koa noho ny homamiadan'ny havokavoka tamin'ny taona 64 tamin'ny taona 1986. Ny fahafatesany dia fony izy telo herinandro taorian'ny nanendrena azy ho mpitantana Manchester United. Ny fahafatesana tsy nisy toa azy dia nandao ny mpitantana vaovao ary nalahelo nandritra ny volana maro. Izany no antony nahatonga azy ho sarotra tamin'ny asa fitantanana Manchester United. Antony nahatonga azy ho nafoy. Fotoana fadiranovana sy a "Fiantraikany ratsy" mba hamono ireo ray aman-dreny ho an'ny aretina (homamiadan'ny havokavoka).
Niady i Fergie ary nitarika governemanta Scottish 'Tsarovy aloha ny kansera' fanentanana izay nahazo ny sandan'ny £ 30million. Nanaiky i Alex Ferguson hanoloana ny fampielezan-kevitra noho ny alahelony manokana ary mba hahazoana ilay hafatra fa afaka manolotra olona ny fisamborana vao haingana "Fotoana fanampiny" Mandany vola miaraka amin'ny fianakaviany.
Hoy izy: "Tsaroako fa nolazaina fa voan'ny kanseran'ny havokavoka ny ray aman-dreniko. Tsaroako ihany koa ny andro nilazako fa ny mamanay dia andro vitsy monja no tokony hiainako. Tonga tany amin'ny hopitaly aho ary nipetraka tamiko ny dokotera, nilaza tamiko izy fa voan'ny kanseran'ny havokavoka, ary hoy izy: "Efa efatra andro izao no iainany." Marina ny azy. Maty efatra andro taty aoriana izy. Ny fahafatesany sy ny fotoana dia iray amin'ireo zavatra mahatsiravina indrindra hitako hatramin'izay. Saingy hafa izao ny zavatra. Androany, ny kanseran'ny havokavoka dia tsy voatery ho fanamelohana ho faty. Ny mahita azy io aloha dia afaka mamonjy ny fiainanao ary manome fotoana bebe kokoa handaniana miaraka amin'ny fianakavianao. Te ho tafiditra tamin'ity fampielezan-kevitra ity aho raha namoy ray aman-dreniko ho voan'ny homamiadana. Fantatro fa mety ho voan'ny kanseran'ny voan'ny kansera mahatsiravina. Noho izany, toy izay tsy manao na inona na inona momba izany, manentana an'izay rehetra manahy aho mba ho voamarina araka izay tratrany. "
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: Fiainana ao amin'ny fianakaviana sy fifandraisana
Alex Ferguson dia nipetraka tany atsimon'i Manchester nandritra ny fahatanorany. Tao amin'io tanàna io dia nihaona tamin'ny vadiny izy, Cathy. Samy nanambady izy ireo tamin'ny 1966.
Ny fanambadiany dia nahazo tsodrano avy hatrany. Ny lahimatoa Marka lahy dia teraka tao 1968. Roa taona aty aorian'ny fanambadian'izy ireo.
Niandry nandritra ny efa-taona izy ireo talohan'ny hahafahany manana olon-kafa. Tamin'ny 9th February, 1972, Alex Ferguson sy ny vadiny dia nanana kambana mahafinaritra hafa antsoina hoe Jason sy Darren.
Alex Ferguson dia nofaritana ho vadin'ny vehivavy mikarakara an'i Cathy vadiny. Tia azy tamin'ny andro iray izy. Izy no olona tsy mahita ny anjara asan'ny vehivavy ao an-trano. Indraindray izy dia hanampy amin'ny trano rehetra ao an-trano, anisan'izany ny lakozia.
Samy nahita ny zanany nitombo tao anatin'ny fahasambarana ireo mpitia roa ireo. Ho an'i Alex Ferguson, "Ny fianakaviana dia tsy zava-dehibe. Izany rehetra izany. "
Ny fanambadian'izy ireo dia nofaritana ho anisan'ny mahomby indrindra ao Angletera. Maro no nahita izany mendrika izany. Ny fiainam-pianakaviana nankalazan'izy ireo dia naharitra mihoatra ny 51 taona.
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: Niteraka zazakely
Ny lahimatoan'i Alex Ferguson, zokiny indrindra dia mpanazatra an'i Peterborough United ary mpilalao baolina taloha.
Iray amin'ireo kambana antsoina hoe Daren izay sary eto ambany no nilalao teo ambanin'ny Manchester United dadany tamin'ny taona 1990 ka hatramin'ny 1994. Izy no mitantana ankehitriny Doncaster Rovers toy ny tamin'ny fotoana nanoratana.
Mpifankatia iray hafa, Jason Ferguson dia mitantana ny ekipa baolina kitra antsoina hoe 'Elite Sport'izay niara-niasa tamin'i Manchester United nandritra ny taona naha-rainy azy nitantana ny klioba. Izy koa dia mitantana orinasa fitantanana ny hetsika.
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: Lahateny miaraka amin'i David Beckham
Mazava fa i Ferguson dia mihevitra an'i David Beckham ho iray amin'ireo nenjehiny lehibe indrindra. Tia an'i Beckham izy; Nieritreritra azy ho toy ny zazalahy izy ary tsy nanaja afa-tsy ny fomba nanenjehany ny nofinofiny nilalao baolina; noho ny faharetany, ny faharetany ary ny faniriany hanaporofoana ny olona diso. Saingy i Ferguson dia nino fa i Beckham dia nanadino izay nahatonga azy ho kintana ary, nitombo hatrany, tsy niraharaha ny hiasa mafy toy izao.
Tao amin'ny 2003, i Ferguson dia nirotsaka tamin'ny adihevitra momba ny fiakanjoana niaraka tamin'i David Beckham mpilalao United. Nampangain'i Beckham ny tsy hamerenany hiverina amin'ny tanjon'ny Arsenal ao Old Trafford. Ferguson dia nitora-bato ny baolina kitra tamin'ny alàlan'ny fandripahana baolina kitra, izay namely ny mpilalao tamin'ny tarehy ary niteraka ratra tamin'i Beckham.
David Beckham kosa nanao zavatra. Navelany haka sary an-tsary sy fanadihadiana ny ampitso ny ratra. Rehefa avy nandinika ny asany i Ferguson dia nanapa-kevitra ny hivarotra azy. Nino izy fa tsapan'i Beckham fa lasa lehibe kokoa noho izy sy ny klioba.
Nanoratra i Ferguson indray mandeha fa nanana ny toerany i Beckham ka namadika azy ho olo-malaza. Araka ny heviny 'Nanana ny fanapahan-kevitra maharesy lahatra izy hanenjika ny lazany lavitra ny saha taorian'ny loza.'
Manoratra ihany koa izy fa tsy misy "Antony ara-baiboly" ho an'i Beckham ho any Los Angeles. 'Nandao ny vintana izy mba ho lasa angano mahazatra indrindra any Etazonia.' hoy Ferguson.
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: Resaka miaraka amin'i Roy Keane
Sir Alex Ferguson dia nandoko ny sarin'i Roy Keane, ny kapiteny sy talismanany teo aloha, ho endrika mahatsiravina sy mampatahotra, afaka mampatahotra na dia izy aza, ary azo antoka fa maro mpilalao ao anatin'ny efitrano fitafy. Keane dia nitondra ny tendron'ny vy sy ny lamosina, izay nolazain'i Ferguson fa ny ampahany sarotra indrindra amin'ny vatany.
Ny fahatongavan'izy ireo dia nanjary anisan'ny folclore Old Trafford ary i Ferguson dia mandinika azy io amin'ny fihemoran'ny hery an-kery ataon'ny Keane sy ny fahasorenany izay vokatr'izany.
Tezitra i Keane noho ny tsapany fa toerana fanam-potoana talohan'ny vanim-potoana teo amin'ny tany fiofanana tany Manchester United. Notohizany ny hanomezana an'ity antsoina hoe 'dinidinika malaza amin'i MUTV ity izay nanakiana an'i Ferguson ary maro koa ireo mpifaninana ao amin'ny ekipa toa an-dry Kieran Richardson, Darren Fletcher, Alan Smith, Edwin van der Sar ary Rio Ferdinand.
Nanazava i Keane fa ny mpanara-maso dia mijery ilay resadresaka mba hahafahan'izy ireo mamorona ny sainy manokana ary inona no tadiavina dia fifandonana mahery vaika eo aminy sy ny maro amin'ireo mpilalao, miaraka amin'i Ferguson. Tsy maintsy niasa izy ary avy hatrany dia nanome sazy an-kitsirano ny fifanekena an'i Keane sy ny fialany amin'ny Celtic.
Ferguson dia nanoratra fa Keene dia nibitsika mba hahita azy hiala tsiny fa ny fifandraisana dia nanjary ratsy be taorian'ny fanehoan-kevitra nataon'ny daholobe teo amin'ny mpivady.
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: Lahateny miaraka amin'i Ruud
Alex Ferguson dia efa nanana olana tamin'ny Ruud izay nolazainy fa tonga noho ny fahalemeny. Ny fifandonan'izy ireo dia nanjary antony nandao an'i Manchester United an'i Ruud van Nistelrooy noho ny toe-javatra mahatsiravina tao 2006. Nanomboka ny lohahevitr'izy ireo rehefa nanonona mivantana sy nanozona azy i Ruud taorian'ny nandrafetana azy nandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany tamin'ny Wigan.
Ferguson dia nilaza fa tsy niandry ny hivarotana ny làlana mankany Real Real izy fa ny fitondrantenany nandritra ny nanery ny tanany. Na izany aza dia nanao antso an-tariby nankany Ferguson i Van Nistelrooy nivoaka ny manga tamin'ny Janoary 2010 mba hiala tsiny amin'ny fitondrantenany.
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: Mahatsiaro ireo Mpanjifa
Taorian'ny fanesorana an'i Darren Ferguson, zanakalahy kambana aminy Preston North End, Ferguson tamim-pahatezerana avy hatrany dia nahatsiaro avy hatrany ireo mpilatsaka an-tsitrapo Ritchie De Laet, Joshua King sy Matty James avy ao Preston teo ambanin'ny rafitr'ity fitantanana vaovao ity. Nanazava izy taty aoriana fa io no fangatahan'ny mpilalao tsy hiverina any Preston taorian'ny fiovan'ny mpitantana. Stoke City manager Tony Pulis Taoriana kelin'izay dia nahatsiaro ireo mpilalao roa tao Manchester Manchester roa avy any Preston ihany koa izy, nilazany ny filàna ny mpilalao hanamafy ny fandaharam-potoanan'ireo ekipany.
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: Vantany vao navoaka i Gareth Bale
Ny Sir Alex Ferguson dia tsy dia mampanahy loatra loatra ny amin'ireo izay miala fa ny lehiben'ny Manchester United ihany no nanao izany Gareth Bale, nanaiky fa tsy nahalala an'ilay mpilalao izy.
Tatitra avy amin'ny Manchester United Scouts dia nanondro fa i Bale dia mihaona amin'ny fangatahan'i Ferguson amin'ny mpilalao havia havia izay mety hanolo an'i Ryan Giggs. Ferguson mihitsy no nanao fangatahana ho an'ny scouts mba hitondra an'i Bale hanatona azy. Na izany aza dia nisy ny zavatra nahatonga ny fifindrana nipoaka. Alex Ferguson rehefa nahita dia nitaraina fa fohy loatra.
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: Mpitarika mpanomana amin'ny famintinana
Ny Ferguson, 32-taona, dia nanomboka ny asany tao amin'ny Stirlingshire Atsinanana tao 1974, izay nahatonga ny fiantraikany avy hatrany amin'ny natiora sy ny fifaninanana. Nifindra tany St Mirren izy taorian'ny volana vitsy, ary na dia nitarika ny Olomasina ho amin'ny fizarana voalohany tamin'ny fizarana Scottish tao 1977 aza izy, dia notifirina herintaona taty aoriana noho ny fandikana ny fifanarahana.
Niaraka tamin'i Aberdeen i Ferguson fa nohamarinina ho mpitantana ambony mpanafika izy. Nandresy ny fiadiana ny tompondakan'i Celtic-Rangers, Ferguson nitarika an'i Aberdeen ho lohatenin'ny baolina fandaka telo, Scottish Cups efatra, Cup League, Super Cup ary Cups iray nandresy tamin'ny taom-polo.
Alex Ferguson dia nandray ny toeran'ny klioban'ny Manchester United malaza fa tsy nahomby tamin'ny volana novambra 1986. Ny asany dia notaterina tao amin'ny tsipika taorian'ny dingana iray goavana indrindra tany am-piandohan'ny taona 1989-90. Ny reraky ny tsy fananany dia vokatry ny fahafatesan'ny reniny. Nandany fotoana ela nisaona ny reniny izay maty tamin'ny homamiadan'ny Lung izay saika nahafaty azy ny asany. Soa ihany ho azy, nahita ny fanarenana ny The Red devils ary nahazo ny Cup FA nandritra ny fotoana fohy. Izany dia nitazona azy tamin'ny asany. Nisy tsiranoka nahomby nanaraka an'i AND ny ambiny izay nolazainy fa tantara.
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: Ny lovany
Sary nalaina avy amin'i Ferguson, noforonin'ny sculptor Scottish Philip Jackson, dia aseho amin'ny alàlan'ny Old Trafford ao amin'ny 23 November 2012.
Tamin'ny 14 ny volana Ôktôn 2013, nanatrika lanonana i Ferguson, izay novana ny lalana teo akaikin'ny Old Trafford Ny fitomboan'ny rano ny Sir Alex Ferguson Way.
Moreso, ilay fehezanteny "Fotoana henjana" izay nofaritan'i Ferguson momba ny dingana farany amin'ny fifaninanana ligy dia tafiditra ao amin'ny Collins English Dictionary ary ny Oxford English Dictionary.
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: Mpandrindra fiompiana
Maro amin'ireo mpilalao baolina kitra Ferguson no lasa mpitantana baolina kitra, toa an'i Tony Fitzpatrick, Alex McLeish, Gordon Strachan, Mark McGhee, Willie Miller, Neale Cooper, Bryan Gunn, Eric Black, Bryan Robson, Steve Bruce, Mark Hughes, Roy Keane , Paul Ince, Chris Casper, Darren Ferguson, Ole Gunna Solskjær, Henning Berg ary Gary Neville.
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: politika
Nomena ny knightthood britanika tao 1999 izy noho ny fandraisany anjara tamin'ny lalao baolina kitra. Tao amin'ny 1998, Ferguson dia voatonona ho lisitry ny mpamatsy vola tsy miankina indrindra ho an'ny Antoko Mpiasa. Izy dia sosista tia tena ary mpanohana ny mpiasa mandritra ny androm-piainana. Tamin'ny Janoary 2011 Graham Stringer, MP MP Manchester ary ny mpanohana an'i Manchester United, niantso an'i Ferguson mba hatao maso ny fiainana. Raha nitranga izany dia mety hanao Ferguson ilay mpilalao baolina kitra taloha na mpilalao baolina kitra taloha na mipetraka ao amin'ny Tranon'ny Tompo. Mpanafika sy solontenan'ny mpampianatra ao Manchester Paul Goggins namerina ity antso ity taorian'ny fampandrenesana ny fisotroan-drononony tamin'ny volana 2013 i Ferguson. Na izany aza, loharano tsy fantatra anarana ao amin'ny Daily Mirror Nanambara ny gazety 1 August 2013 fa nanaiky i Ferguson.
Mandritra ny Ny referandaoma momba ny fahaleovan-tena 2014 Scottish, Ferguson dia mpanohana sy fananganana feo avy amin'ny Better Together fanentanana izay nanohana an'i Ekosy nijanona ho anisan'ny Fanjakana Royaume-Uni. Nitsikera ilay izy Scottish National Party, ary ny mpitarika azy Alex Salmond, noho ny fanapahan-kevitr'izy ireo hisintaka ny Scots monina any ivelan'i Ekosy, saingy ao anatin'ny ambasadin'ny Fanjakana Royaume-Uni, tsy hifidy amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka.
Alex Ferguson tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pianakaviana: fanabeazana
Tao amin'ny 2009, nahazo medaly dokotera i Ferguson teo amin'ny fitantanan-draharaha avy amin'ny orinasa Manchester Metropolitan University.
Izany no faharoa nahazo azy avy amin'ny oniversite, taorian'ny nahazoany tompom-boninahitra tao amin'ny 1998.
Julian Nagelsmann Tantara momba ny fahazazana manampy Untold Biography Facts
Tantara Chris Wilder Childhood Child Plus Untold Biography Facts
Thomas Tuchel tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny tantaram-piainan'i Nuno Espirito Santo momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana
Daty efa namboarina: 12 aprily 2020
Ryan Giggs Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra